DHAGEYSO Olole loogu jiro in lagu bedelo dastuurka oo muran dhaliyay – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Olole loogu jiro in lagu bedelo dastuurka oo muran dhaliyay
Waxaa uu muran iyo hadal hayn siyaasadeed ka dhashay olole uu madaxa xisbiga Thirdway Alliance Dr. Ekuro Aukot ugu jiron in isbedel lagu sameeyo dastuurka wadanka u degsan.
Siyaasigan ayaa ku doodaya in tirada hoggaamiyaasha baarlamaanka iyo aqalka sare ay tahay mid sareysa oo la doonayo in la yareeyo.
Waxaa uu dadaal ugu jiraa inuu soo aruuriyo saxiixyo gaaraya hal milyan oo uu ku muujinayo in shacabka Kenyaanka ah ay diyaar u yihiin in la qabto afti lagu bedelayo dastuurka.
Hasa ahaate waxaa dhanka kale isa soo taraya siyaasiyiinta ololahaasi ka soo horjeeda oo ay ka mid yihiin hoggaamiyaha xisbiga Wiper, Kalonzo Musyoka iyo dhigiisa ANC, Musalia Mudavadi.
Mr. Musyoka ayaa sheegay inuusan tageeri doonin dadaal kasta oo ku aaddan in la bedelo dastuurka maadaama sida uu hadalka u dhigay ay dib u dhac u horseedi karto nidaamka dowlad wadaajinta ee dalka ka dhaqangalay sannadii 2013-kii.
Hoggaamiyaha Wiper ayaa sheegay in xal u raadinta musharaadka la siiyo mas’uuliyiinta dalka aanan qiil looga dhigi karin in meesha laga saaro aqalka sare iyo golayaasha maamul goboleedyada dalka.
Mr. Musyoka oo arrinkan ka hadlay xili uu maanta ku sugnaa ismaamulka Machakos ayaa sheegay in la doonayo in la sii xoojiyo maamulada jira.
Waxaa uu intaasi ku daray in caqabadda ugu weyn ee haysata dowlad wadaajinta ay tahay musuqmaasuqa iyo kheyraadka dadweynaha loogu adeego oo loo isticmaalo si aanan habboonayn.
Hoggaamiyaha xisbiga ANC, Musalia Mudavadi ayaa dhankiisa sheegay in xiligan aysan caqli gal ahayn in qof Kenyaan ah oo uu culeys ku hayo qiimaha canshuurta shidaalka ee la kordhiyay la weydiiyo in dastuurka la bedelayo iyo in kale.
Ololaha ku aaddan afti qaran oo la sameeyo si isbedel loogu sameeyo ayaa waxaa sido kale ka soo horjeestay siyaasiyiin ka tirsan maamulka talada haya ee Jubilee oo ay ka mid yihiin hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Mr. Aadan Barre Ducaale iyo senetarka ismaamulka Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen
← Abaanduulaha booliska oo sheegay in dowlada ay ka go’antahay isbedelada ammaanka
Wasiirka beeraha oo sheegay in dhawaan lacagahooda la siinayo beeraleyda Galeyda →